【 အလှအပနှငျ့ ကနျြးမာရေး 】စိတျကခြွငျး (Depression) | Opinion Leaders
【 အလှအပနှငျ့ ကနျြးမာရေး 】စိတျကခြွငျး (Depression)
လူမှနျသမြှ စိတျဆိုတာ တကျလိုကျ၊ ကလြိုကျဖွဈကွတာ ပုံမှနျပါ။ ဒါပမေဲ့ Depression စိတျကတြယျ ဆိုတာ ဝမျးနညျးပူဆှေးတာထကျ အမြားကွီး ပိုလှနျပါတယျ။ စိတျကသြူတှဟော ဝမျးနညျးအားငယျနတေဲ့လက်ခဏာ အပွငျ တခြို့ ယောကျြားတှမှောဖွဈရငျ စိတျတို၊ ဒေါသကွီး၊ ဂနာမငွိမျ ၊အရကျ အလှနျအကြှံ သောကျလာမယျ။တခြို့ဆို အိပျမပြျော၊ ဒါမှမဟုတျ အမွဲတမျး အိပျခငျြနေ၊ အာရုံမစိုကျနိုငျ၊ အားအငျကုနျခမျးနမေယျ၊ ဘာလုပျလုပျ နှေးကှေးနမေယျ၊ လေးလံ ထိုငျးမှိုငျးနမေယျ။ တယောကျနဲ့ တယောကျ မတူဘူး။ ယောကျြား-မိနျးမ မတူသလို၊ ကလေး-လူကွီးလဲ မတူကွဘူး။
၂)လူမှုအသိုငျးအဝိုငျးရဲ့ ကူညီထောကျပံ့မှု မရခွငျး
၄)မိဘ၊ ဆှမြေိုး၊ မောငျနှမတှထေဲမှာ စိတျကဝြဒေနာရောဂါရှိခွငျး
၇) ငယျစဉျ ကလေးဘဝမှာ စိတျဒဏျရာရခဲ့ဖူးခွငျး
၈)အရကျ၊ မူးယဈဆေး အလှနျအကြှံ သုံးစှဲခွငျး
၉)ကနျြးမာရေးမကောငျးခွငျး(ဥပမာ နာတာရှညျရောဂါ၊ ကငျဆာဝဒေနာ ခံစားနရေခွငျး)
အမြိုးအစား (၃) မြိုး ရှိတယျ။
ကုသနညျး ၃ မြိုးရှိတယျ။
(၁) Psychotherapy စိတျကို စိတျနဲ့ကုတာ အကောငျးဆုံးဖွဈတယျ။
(၂) Medication ဆေးနဲ့ ကုသခွငျး
(၃) Electroconvulsive therapy လြှပျစဈနဲ့ကုခွငျး တို့ဖွဈပါတယျ။
Psychotherapies စိတျကိုစိတျနဲ့ကုသခွငျးကအကောငျးဆုံးပါပဲ။ Talking therapies နဲ့ Cognitive behavioral therapies စတဲ့နညျးအမြိုးမြိုး ရှိတယျ။Cognitive behavioral therapy (CBT) နညျးဟာ ကလေးတှနေဲ့ လူငယျတှအေတှကျ အသုံးမြားတယျ။
အရေးအကွီးဆုံးက ကိုယျ့ကိုယျကိုရော သူမြားကိုပါ စိတျက အပွဈမတငျမိအောငျ ကွိုးစားပါ။
Antidepressants စိတျကရြောဂါဆေးတှကေတော့ -
၁)Monoamine oxidase inhibitors (eg Phenelzine (Nardil) နဲ့ Tranylcypromine (Parnate))အရငျဆုံးပျေါတဲ့ ဆေးဖွဈတယျ။ ဘေးထှကျဆိုးကြိုးတှကေတော့ နခေ့ငျးအိပျခငျြနခွေငျး၊သှေးဖိအားကခြွငျး၊ ဝမျးပကျြခွငျး၊ အာခေါငျခွောကျခွငျး၊ ဂနာမငွိမျဖွဈခွငျး၊ ကိုယျအလေးခြိနျတကျလာခွငျး၊ လိငျစိတျနညျးခွငျး၊ထုံကငျြခွငျးတို့ဖွဈပါတယျ။
၂)Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) (eg Fluoxetine နဲ့ Sertraline) အသုံးမြားဆုံးဆေး ဖွဈတယျ။ ဘေးထှကျဆိုးကြိုးတှကေ ပြို့ခွငျး၊အာခေါငျခွောကျခွငျး၊ခေါငျးကိုကျခွငျး၊ ဂနာမငွိမျ၊ စိတျတို၊ ဒေါသထှကျခွငျး၊ လိငျစိတျနညျးခွငျး တို့ဖွဈပါတယျ။
၃) Tricyclic antidepressants (TCAs) (Eg- Amitriptyline (Elavil), Imipramine (Tofranil)) ဘေးထှကျဆိုးကြိုးတှကေတော့
သှေးဖိအားကခြွငျး၊ ဝမျးပကျြခွငျး၊ အာခေါငျခွောကျခွငျး၊ ဂနာမငွိမျဖွဈခွငျး၊ ကိုယျအလေးခြိနျတကျလာခွငျး၊ လိငျစိတျနညျးခွငျး၊တို့ဖွဈပါတယျ။
Antidepressants ဆေးတှကေို သကျသာလာရငျ ဖွေးဖွေးခငျြး လြှော့ပေးရတယျ။ ရုတျတရကျ မရပျရဘူး
Electroconvulsive therapy (ECT) လြှပျစဈနဲ့ကုသခွငျးကို ဆေးမတိုးသူတှေ၊ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖွဈသူတှေ၊ ကိုယျ့ကိုယျကို သတျသဖေို့ အလားအလာ မြားနသေူတှအေတှကျ လုပျပါတယျ။
1.Panic attacks စိတျမထိနျးနိုငျဖွဈခွငျး 2.Anxiety disorder စိုးရိမျစိတျလှနျကဲခွငျး 3.Bipolar situation စိတျနှဈခှဖွဈခွငျး တို့ဖွဈပျေါလာနိုငျတယျ။
စိတျကရြောဂါလက်ခဏာမြားကို သတိမပွုမိဘဲ ကုသမှုမခံယူပါက မိမိကိုယျကို အန်တရာယျပွု
ုခွငျး သတျသခွေငျး စသညျတို့အထိ အန်တရာယျရှိလာနိုငျသညျ။ထို့ကွောငျ့ မိမိကိုယျတိုငျသာမက မိသားစု မိတျဆှေ ပတျဝနျးကငျြ တှငျလညျး စိတျကရြောဂါလက်ခဏာမြားကို စောစီးစှာသတိပွုမိရနျလိုအပျသညျ။
ဘယျလို သကျသာအောငျလုပျမလဲ ?
• ပုံမှနျ ကိုယျလကျလကေ့ငျြ့ခနျးလုပျပါ
• စိတျဖိစီးမှုမြားကို တတျနိုငျသလောကျလြှော့ခပြါ
• ကိုယျ့ကိုယျကိုရော သူမြားကိုပါ စိတျက အပွဈမတငျမိအောငျ ကွိုးစားပါ။
• အဆိုးမွငျ၊ မကောငျးမွငျတာတှပွေု ပွငျပါ၊
• စိတျငွိမျအောငျ တရားထိုငျပါ
လူမှန်သမျှ စိတ်ဆိုတာ တက်လိုက်၊ ကျလိုက်ဖြစ်ကြတာ ပုံမှန်ပါ။ ဒါပေမဲ့ Depression စိတ်ကျတယ် ဆိုတာ ဝမ်းနည်းပူဆွေးတာထက် အများကြီး ပိုလွန်ပါတယ်။ စိတ်ကျသူတွေဟာ ဝမ်းနည်းအားငယ်နေတဲ့လက္ခဏာ အပြင် တချို့ ယောက်ျားတွေမှာဖြစ်ရင် စိတ်တို၊ ဒေါသကြီး၊ ဂနာမငြိမ် ၊အရက် အလွန်အကျွံ သောက်လာမယ်။တချို့ဆို အိပ်မပျော်၊ ဒါမှမဟုတ် အမြဲတမ်း အိပ်ချင်နေ၊ အာရုံမစိုက်နိုင်၊ အားအင်ကုန်ခမ်းနေမယ်၊ ဘာလုပ်လုပ် နှေးကွေးနေမယ်၊ လေးလံ ထိုင်းမှိုင်းနေမယ်။ တယောက်နဲ့ တယောက် မတူဘူး။ ယောက်ျား-မိန်းမ မတူသလို၊ ကလေး-လူကြီးလဲ မတူကြဘူး။
၂)လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ ကူညီထောက်ပံ့မှု မရခြင်း
၄)မိဘ၊ ဆွေမျိုး၊ မောင်နှမတွေထဲမှာ စိတ်ကျဝေဒနာရောဂါရှိခြင်း
၇) ငယ်စဉ် ကလေးဘဝမှာ စိတ်ဒဏ်ရာရခဲ့ဖူးခြင်း
၈)အရက်၊ မူးယစ်ဆေး အလွန်အကျွံ သုံးစွဲခြင်း
၉)ကျန်းမာရေးမကောင်းခြင်း(ဥပမာ နာတာရှည်ရောဂါ၊ ကင်ဆာဝေဒနာ ခံစားနေရခြင်း)
အမျိုးအစား (၃) မျိုး ရှိတယ်။
ကုသနည်း ၃ မျိုးရှိတယ်။
(၁) Psychotherapy စိတ်ကို စိတ်နဲ့ကုတာ အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။
(၂) Medication ဆေးနဲ့ ကုသခြင်း
(၃) Electroconvulsive therapy လျှပ်စစ်နဲ့ကုခြင်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။
Psychotherapies စိတ်ကိုစိတ်နဲ့ကုသခြင်းကအကောင်းဆုံးပါပဲ။ Talking therapies နဲ့ Cognitive behavioral therapies စတဲ့နည်းအမျိုးမျိုး ရှိတယ်။Cognitive behavioral therapy (CBT) နည်းဟာ ကလေးတွေနဲ့ လူငယ်တွေအတွက် အသုံးများတယ်။
အရေးအကြီးဆုံးက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရော သူများကိုပါ စိတ်က အပြစ်မတင်မိအောင် ကြိုးစားပါ။
၁)Monoamine oxidase inhibitors (eg Phenelzine (Nardil) နဲ့ Tranylcypromine (Parnate))အရင်ဆုံးပေါ်တဲ့ ဆေးဖြစ်တယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကတော့ နေ့ခင်းအိပ်ချင်နေခြင်း၊သွေးဖိအားကျခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ အာခေါင်ခြောက်ခြင်း၊ ဂနာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်တက်လာခြင်း၊ လိင်စိတ်နည်းခြင်း၊ထုံကျင်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။
၂)Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) (eg Fluoxetine နဲ့ Sertraline) အသုံးများဆုံးဆေး ဖြစ်တယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက ပျို့ခြင်း၊အာခေါင်ခြောက်ခြင်း၊ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဂနာမငြိမ်၊ စိတ်တို၊ ဒေါသထွက်ခြင်း၊ လိင်စိတ်နည်းခြင်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။
၃) Tricyclic antidepressants (TCAs) (Eg- Amitriptyline (Elavil), Imipramine (Tofranil)) ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကတော့
သွေးဖိအားကျခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ အာခေါင်ခြောက်ခြင်း၊ ဂနာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်တက်လာခြင်း၊ လိင်စိတ်နည်းခြင်း၊တို့ဖြစ်ပါတယ်။
Antidepressants ဆေးတွေကို သက်သာလာရင် ဖြေးဖြေးချင်း လျှော့ပေးရတယ်။ ရုတ်တရက် မရပ်ရဘူး
Electroconvulsive therapy (ECT) လျှပ်စစ်နဲ့ကုသခြင်းကို ဆေးမတိုးသူတွေ၊ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်သူတွေ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေဖို့ အလားအလာ များနေသူတွေအတွက် လုပ်ပါတယ်။
1.Panic attacks စိတ်မထိန်းနိုင်ဖြစ်ခြင်း 2.Anxiety disorder စိုးရိမ်စိတ်လွန်ကဲခြင်း 3.Bipolar situation စိတ်နှစ်ခွဖြစ်ခြင်း တို့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်။
စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများကို သတိမပြုမိဘဲ ကုသမှုမခံယူပါက မိမိကိုယ်ကို အန္တရာယ်ပြု
ုခြင်း သတ်သေခြင်း စသည်တို့အထိ အန္တရာယ်ရှိလာနိုင်သည်။ထို့ကြောင့် မိမိကိုယ်တိုင်သာမက မိသားစု မိတ်ဆွေ ပတ်ဝန်းကျင် တွင်လည်း စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများကို စောစီးစွာသတိပြုမိရန်လိုအပ်သည်။
ဘယ်လို သက်သာအောင်လုပ်မလဲ ?
• ပုံမှန် ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ
• စိတ်ဖိစီးမှုများကို တတ်နိုင်သလောက်လျှော့ချပါ
• ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရော သူများကိုပါ စိတ်က အပြစ်မတင်မိအောင် ကြိုးစားပါ။
• အဆိုးမြင်၊ မကောင်းမြင်တာတွေပြု ပြင်ပါ၊
• စိတ်ငြိမ်အောင် တရားထိုင်ပါ